EX - ABSDF: ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ခြင်း
by Htun Aung Gyaw on Saturday, December 15, 2012 at 11:42am ·
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည့်အခါ ၁၉၄၇ အခြေခံ ဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စုစံနစ် အုပ်ချုပ်ပုံမဟုတ်ဘဲ တပြည်ထောင်စံနစ်သာ ဖြစ်သည်ဟု ရှမ်းခေါင်းဆောင်များက ဦးဆောင်တင်ပြလာခဲ့ပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရေးကို တောင်းဆို လာခဲ့ကြသည်။
လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် ပြည်တွင်းလက်ဝဲ ကွန်မြူနစ်များက ပုန်ကန်ထကြွခဲ့ပြီး၊ ကရင်တပ်များကလည်း ကေအင်ဒီအို (KNDO) Karen National Deface Organization က ဦးဆောင်ပြီး ပုန်ကန်ခဲ့ကြသဖြင့် လွတ်လပ်ခါစ နိုင်ငံ သည် ပြည်တွင်းစစ်မီးများ ကြားတွင် ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ပြည်သူများက သူပုန်များကို နှိမ်နှင်းနေသည့် တပ်မတော်ကို အားကိုးလာခဲ့ကြပြီး တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးတွင် အရေးပါလာခဲ့သလို ပြည်တွင်းစစ်ကို ရင်ဆိုင်ရင်း သြဇာအာဏာ ကြီးမားလာ ခဲ့ရသည်။ တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းကို အားကိုးလာခဲ့ကြသည်။
တတိုင်းပြည်လုံးကို တပ်သားသုံးသိန်းကျော် အင်အားဖြင့် ဖိနှိပ်ထားသော စစ်အာဏာ ရှင်စံနစ်ကို မိမိပြည်နယ် တခုတည်း လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သက်သက် တိုက်ပွဲဝင်နေ မှုသည် “တောင်ကြီးဖြိုမဲ့ကြံ ခါးကမသန်”ဆိုသည့် ပမာဖြစ်နေသည်။ အဓိက တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ မြင်ရမည်မှာ မြန်မာပြည်တပြည်လုံး လွတ်မြောက်မှ ငါတို့ပြည်နယ်ပါ လွတ်မြောက်မည် ထို့ကြောင့် တပြည်လုံး လွတ်မြောက်ရေးကို ငါတို့ ကြိုးစားရမည် ဆိုသည့် အမြင်ကို ထားရှိဘို့လိုသည်။ ထိုသို့ တပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးထက် တပြည်လုံး လွတ်မြောက်ရေး ဆိုသည့် အမြင်သို့ ပြောင်းပစ်လိုက်ပါက တော်လှန်ရေး အောင်မြင်သော နေ့တွင် ထိုခေါင်းဆောင်များသည် ပြည်နယ် ခေါင်းဆောင်များဘ၀ သာမက တနိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသော အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များဘ၀သို့ တက်လှမ်း ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း လက်ထက်မှစ၍ ဗိုလ့်သန်းရွှေ လက်ထက်အထိ မြန်မာ စစ်တပ်သည် လူမျိုး ကြီးဝါဒဖြင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကို မြန်မာမှု (Burmanization) ပြုခဲ့ကြခြင်းသည် တိုင်း ရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ကြီးစွာသော ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစာပေများ သင်ကြားခွင့်ကို ပိတ်ပင်၍ မြန်မာစာ ကိုသာ သင်ကြားစေခြင်း တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိမ်းသိမ်းပေးခြင်း မပြုဘဲ မျက်ကွယ်ပြုခြင်းတို့သည် အလွန်ကျဉ်မြောင်းသည့် လူမျိုးကြီး ၀ါဒဖြစ်သည်။ အမေရိ ကန်၊ ဥရောပ နိုင်ငံများတွင် မူလတန်းအောင်ပြီး (၄- ၅) တန်း ရောက်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအပြင် နိုင်ငံခြား ဘာသာရပ် တခုခုကိုပါ တွဲယူရသည်။ နိုင်ငံခြားသား အခြေချသူများ ရောက်လာသည့် အခါတွင် စာသင်အရွယ် ခလေးသူငယ်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာအပြင် မိမိ လူမျိုး ဘာသာစကား မပျောက်ကွယ်ရအောင် စောင့်ရှောက်ကြဘို့ အားပေးခြင်း ကူညီခြင်းကို ပြုကြသည်။ တိုင်းတပါး ဘာသာစကား၏ တန်ဘိုးကို လေးစားကြသည်။ အမျှော်အမြင် ကြီးကြသည်။ ငါ့ဘာသာစကားကိုဘဲ သင်ရမည်ဟုအနိုင်ကျင့်မှုမရှိ။ ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တွင် အကျယ်ဆွေးနွေး တင်ပြသွားပါမည်။
ဗမာမုန်းတီးရေး စိတ်ကို ခြေဖျက်လိုလျှင် တိုင်းရင်းသားများဖက်မှ ၎င်းတို့ကို ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ်နေသော ရင်းမြစ်ကို သိမြင်ဘို့လိုသည်။ ၎င်းတို့နှင့် ဗမာ တိုင်းရင်းသားများကို သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်နေသည့် စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ကို မြင်မှသာ ဗမာမုန်းတီးရေး စိတ်မှ ဗမာများ နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း၍ စံနစ်ဆိုးကို အတူတကွ တိုက်ထုတ်ပစ်မှသာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ဖြစ်သော သာတူညီမျှရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိရေး၊ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆိုသည့် ပန်းတိုင်ကို အဖိနှိပ်ခံပြည်သူများ၏ စုပေါင်းအားဖြင့် တည်ဆောက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနည်းတူ ဗမာလူမျိုးများကလည်း စစ်အာဏာရှင်စံနစ်သည် တတိုင်းပြည် လုံးကိုဗမမှုပြုခြင်း(Burmanization) သည် အားကျစရာ၊ သဘောတူစရာ လုပ်ရပ် မဟုတ်၊ အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည့် လူမျိုးကြီးဝါဒ (တနည်း) မဟာဗမာဝါဒဖြစ်သည်။ ၎င်းဝါဒ သည် မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို အင်အားတောင့်တင်းသည့် ဗမာနိုင်ငံတော်ကြီး အဖြစ်သို့ တွန်းမပို့ဘဲ ပြည်တွင်းစစ် သံသရာ၌ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေမည့် ၀ါဒဖြစ်သည်။ ထိုဝါဒသည့်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲရေးကိုဦးတည်စေသည်ဟုမြင်ရမည်။ ထိုအခါ မှညီနောင် တိုင်းရင်းသားများ၏ တန်ဘိုး မဖြတ်နိုင်သည့် အမွေအနှစ်များဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းစာပေ၊ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှုများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ မြေတောင်မြှောက်၍ အရှည်တည်တံ့ အောင် တန်ဘိုးထား အားပေးခြင်း၊ ကာကွယ် စောင့်ခြင်းတို့ကို ယုံယုံကြည်ကြည် အားတက် သရောဖြင့် ရိုးသားစွာ ပြုကြဘို့ လိုအပ်ပေသည်။
သူ့တင်ပြချက်ကို ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ပိုင် တဦးတယောက်အနေနှင့် လက်ခံပါသည်။ ဟုတ် ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဟုခေါ်ခေါ် ဗမာနိုင်ငံဟုခေါ်ခေါ် ၎င်းအမည်သည် ဗမာလူမျိုးကို ကိုယ်စား ပြုနေသယောင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခင်ဗျားမှာကော ဒီနံမည်မကြိုက်ရင် ဘယ်လို စဉ်းစား ထားတာ ရှိသလဲဟု မေးခဲ့သည့်အခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က သူ့တွင်လည်း မစဉ်းစားရသေးကြောင်း သို့ရာတွင် လက်ရှိအမည်ကိုမူ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဟု ခံစားရပြီး ဗမာလူမျိုး ကိုသာ ကိုယ်စားပြုနေသည်ဟုမြင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာမှာအမည်စွဲနေသည့်ပြဿနာဖြစ်သည်၊ အနှစ်သာရထက် အမည်ကို စွဲ၍ပြဿနာတက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
မွန်ကိုယ်စားလှယ် တင်ပြချက်သည် ဗမာလူမျိုးများအားလုံး စဉ်းစားရမည့် အချက်ဖြစ် ပါသည်။ မြန်မာဟုဆိုဆို ဗမာဟုဆိုဆို ၎င်းနံမည်သည် ဗမာလူမျိုးများကို အဓိက ဇောင်းပေး မှည့်ခေါ်ထားသော နံမည်လို်ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုကြောင့် အများ သဘောတူသည့် နိုင်ငံ့အမည်ကို အနာဂါတ် ခေါင်းဆောင်များ စဉ်းစားဘို့ လိုလာပါသည်။ စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကို တည်ဆောက်ချင်လျှင် ဗမာလွှမ်းမိုးမှုကို ပယ်ဖျက်ရာ၌ နိုင်ငံအမည်သည်လည်း အဓိက ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
မြန်မာပြည်ဖွား ကိုယ့်လူများသည် မိမိကိုယ်ကို အလွန် သိဒ္ဓိတင်လေ့ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားများကို ကကြီးဟု၎င်း ဂျပန်များကို ခွေးဟု၎င်း၊ မိမိကိုယ်ကို ရွှေဟုလည်းကောင်း တင်စားကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် အကြံထွက်သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို “သုဝဏ္ဏဘူမိ” ခေါ်ရင်ကော တိုင်းရင်းသား အများစုက ကြေနပ်ကြပါမည်လားဟု မေးချင်ပါသည်။ သုဝဏ္ဏ= ရွှေ၊ ဘုမ္မိ= မြေ၊ ရွှေမြေဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဤသည်က တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှု၍ တတ်သလောက် ကလေးနှင့် စိတ်ကူးယဉ် တင်ပြချက်သာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်နံမည်ကို န၀တ/ နအဖ တို့က ပြည်သူ့ဆန္ဒ မပါဘဲ ပြောင်းလိုပြောင်း၊ အလံတော်ကို ဖြုတ်လိုဖြုတ် လုပ်နေသော်လည်း အကယ်၍ ဖယ်ဒရယ်စစ်စစ် တည်ဆောက်ရာတွင် ပြည်တွင်းရှိ လူအားလုံး၏ သဘောဆန္ဒကို ခံယူ၍ အများကြေနပ်သော နံမည်ကို လက်ခံရယူခြင်းသာလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ ဗမာလူမျိုးကြီးကို မယုံကြည်ခြင်း၊ လူအင်အားများသော ဗမာများက မိမိပြည်နယ် ငယ်လေးကို ဖိအားသုံး အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရန်ဟု ကြံရွယ်ကာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ပြည်မကို ပြည်နယ်တနယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရေးကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲတွင် အဆိုပြုခဲ့သည်ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအချက်က တိုင်းရင်းသားများက ပြည်မရှိဗမာလုူမျိုးများ၏ သြဇာအာဏာကို ထိမ်းချုပ် ရန် ကြိုးစားမှုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လူမျိုးရေး အမြင်ဖြစ်သော ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ကရင်၊ ကချင်စသည့် အစွဲများရှိနေပြီး ဗမာမုန်းတီးရေး (သို့) ဗမာဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်များ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များတွင် ကိန်းဝပ်နေခဲ့၍ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်များနှင့် ပြည်မ ဟူသည့် ကွဲပြားမှုက အားပြိုင်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စသည် ဗမာအများစုက လက်ခံ ကျင့်သုံး နိုင်သည့် တောင်းဆိုမှုဟု မထင်ပါ။ ပြည်နယ်အားလုံး စုပေါင်းထားသော လူဦးရေ ထက် များနေသော ဗမာအုပ်စုကို တပြည်နယ် တမဲစံနစ်နှင့် သွားမည်ဆိုသည်က ဗမာများက လက်သင့်ခံမည့် စံနစ်မဟုတ်ချေ။ အဓိက ပြဿနာမှာ လူမျိုးစုနံမည်နှင့် အခြေခံသည့် ပြည်နယ်များ ဖြစ်နေကြ၍ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ် တခုတည်းတွင်ပင် ပြဿနာများစွာရှိသည်။ ကျွန်တော်၏ ဖြေရှင်းချက်သည် တုံးတိတိ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည် သို့ရာတွင် ပြည်နယ်ပြည်မ ပြဿနာ များအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် တခုတည်းသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်ဟု မြင်သဖြင့် တင်ပြပါမည်။ ပြဿနာအစနံမည်က
လူမျိုးစုများအတွက်လည်း မိမိလူမျိုးစု ပြည်နယ် လိုချင်ပါသည်ဟူသော တောင်းဆိုမှု သည်ပြည်တွင်း စစ်ကိုလက်ယပ်ခေါ်နေသည်နှင့်တူသည်။ အဓိကပြောင်းလဲရမည်မှာအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ မိမိလူမျိုးစုအစွဲ ကိုဖျောက် ပြီးတနိုင်ငံလုံးသည် ငါတို့အားလုံးသည့်ဆိုင်သည်ဟူသောပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ရှိဖို့လိုပေသည်။
လူမျိုးစုအမည်နှင့်မှည့်ထားသောပြည်နယ်များကြောင့်လူမျိုးစွဲပေါ်လာသည်။ ဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဟုခေါ်တွင် လိုက်သည့်အတွက် ရှမ်းများသာပိုင်သည့်ပြည်နယ် ဟုအထင် ရောက် သည်၊ ထိုအခါပအို့တို့ကသူတို့ပအို့ပြည်နယ်၊ဝတို့ကသူတို့ဝပြည်နယ်လိုချင် ပါသည်ဟု တောင်း ဆိုမှုက ဖြစ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့လူမျိုးစုများကသီးခြားပြည်နယ်များ တောင်းလာခြင်း သည် လူမျိုးစုနံမည် နှင့် မှည့် ခေါ်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြည်နယ်များအမည်ကို အမေရိကန် ကဲ့သို့လုမျိုးစု အမည်အစား ဒေသ အမည်ကို ရွေးချယ်မှည့်ခေါ်ခြင်းဖြင့် လူမျိုးရေးအစွဲများ ကို ဖျောက် ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိက ပြဿနာ မှာ မိမိနေထိုင်သောနယ်မြေဒေသ ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရဖို့၊ပြည်နယ်အစိုးရများတွင် မိမိပြည်နယ် နှင့်သင့်တော်သောတရားဥပဒေများ ပြဌါန်းနိုင်ခွင့်ရဖို့ ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ သည်သာ လိုရင်းဖြစ်သည်။
လူမျိုးစုတစုနံမည်တပ်လိုက်လျှင်ထိုလူမျိုးစုကိုသာကိုယ်စားပြုသွားသဖြင့်ကျန်လူမျိုးစုတို့နှင့်မဆိုင်ဘဲထိုနံမည်တပ်ထားသောလူမျိုးစုနှင့်သာဆိုင်သဖြင့်ကျန်လူမျိုးစုများကလဲသူတို့ကိုယ်ပိုင်လူမျိုးစုပြည်နယ်များတောင်းဆိုသည့်ပြဿနာဖြစ်လာသည်။ထို့ကြောင့်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်း ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မှာ လူမျိုးစုနံမည်နှင့်မှည့်ခေါ်ထား သောပြည်နယ်များကိုလုမျိုးစု နှင့်မသက်ဆိုင်သောဒေသနံမည် တခုခု ကိုထိုပြည်နယ်ရှိပြည်သူလူထု မဲဆန္ဒဖြင့်ကောက်ခံပြီး ပြောင်းလဲအစားထိုးမှည့်ခေါ်ခြင်းဖြင့်လူမျိုး စွဲများကိုပပျောက်စေပြီးစစ်မှန်ပြီးလူမျိုးစွဲမရှိဘဲမိမိနေ ထိုင်သောပြည်နယ်ကောင်းစားရေး၊ ထိုပြည် နယ် တွင်းမှီတင်းနေထိုင်သောပြည်သူလူထုကြီးတ ရပ်လုံးအတွက်လုပ်ဆောင်မည်ဆို သည့် ခေါင်းဆောင် ကိုပြည်သူတို့ကရွေးချယ်တင်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ကို ကမ္ဘောဇပြည်နယ်ဟုအမည်သစ်မှည့်ခေါ်လိုက်သည် ဆိုပါဆို့ ထိုကမ္ဘောဇပြည် နယ် သည်လူမျိုးစုအမည်ကိုအခြေမခံသောကြောင့်ထိုပြည်နယ်သည် ထိုပြည်နယ်တွင်းနေထိုင် သော လူမျိုးစုအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ထိုပြည်နယ်အတွင်းရှိပြည်သူ အများစုကရွေးချယ်လိုက်သော သူ သည်မည်သည့်လူမျိုးမှပေါက်ဖွါးသူဖြစ်ပါစေထိုပြည်နယ် ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။အဓိကခေါင်းဆောင် ရွေးမှုတွင်အရည်အချင်းရှိသောသူလူချစ်လူခင် များပြီးဦးဆောင်နိုင်သူ၊ ပြည်သူအများကထောက်ခံ သူ ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခွင့်အပြည့်အဝ ရှိရမည်။ မိမိလူမျိုးစုအမည်နှင့်ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုများ လူမျိုး ရေးရှေ့တန်းတင်မှုများ ကိုကာ ကွယ်နိုင်ပြီး လူမျိုးစွဲများပျောက်ကွယ်၍ မိမိပြည်နယ်တွင်းနေထိုင်သော ပြည်သူအားလုံး အတွက် ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရှမ်းမှ ခေါင်းဆောင်၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကချင်မှခေါင်း ဆောင်ဖြစ်ရမည်ဆိုသည့် လူမျိုးစွဲအမြင် များ ကွယ်ပျောက်ပြီးစစ်မှန်သောဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင် စု ကိုတည်ထောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိပြည်နယ်၇ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း၇တိုင်းရှိသော မြန်မာ နိုင်ငံကိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ် ခေါင်း ဆောင်တချို့ကတိုင်း(၇)တိုင်းကိုပေါင်းပြီး ဗမာပြည်နယ် တပြည်နယ်အဖြစ်ထားကာ ရှစ်ပြည်ထောင် ပြည်ထောင်စုမူကိုတင်ကြသည်။
ဘာကြောင့်ထိုကဲ့သို့တင်လာသနည်းကိုလေ့လာလျှင်ဗမာ လူမျိုးများကိုမယုံကြည်မှု၊ မုန်းတီး မှုမှ မြစ်ဖျားခံလာသည်၊ ဗမာလူများစုကြီးကိုပြည်နယ်တခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးချုပ်ကိုင်ထား ချင်သည့် မယုံကြည်မှုနောက်မှကြောက်ရွံမုန်းတီးမှုကပါနေခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏ ၆၀% ကျော်ရှိ သောဗမာဟုသတ်မှတ်ထားသူများကိုပြည်နယ်တပြည်နယ်ဟုသတ်မှတ်ပေး ထားပြီးကျန်လုမျိုးစုများက ၇ မဲ ၁မဲ ဖြင့်ပါလီမန်တွင်ချုပ်ကိုင်ထားလိုခြင်းမှာခေတ်အဆက် ဆက်စစ်အာဏာပိုင်များကမဟာဗမာ စိတ်ဓါတ်ဖြင့်နှစ်ရှည်လများ၎င်းတို့အကျိုးအတွက်သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ထားခဲ့ခြင်း၏ရလာဒ် ဆိုးကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမှန်စဉ်စစ် တိုင်း (၇) တိုင်းတွင်နေထိုင်နေသောသူများသည်၊ တောင်တန်း ဒေသ များ၊ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူများနှင့်လူမျိုးပေါင်းစုံရောယှက် နေသည့် တိုင်းများဖြစ်သည်။ ဗမာလုမျိုးစစ်စစ်များချည်းနေထိုင်သောဒေသများမဟုတ်ချေ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကပြဿနာမှာလူမျိုးစုများ၏တန်းတူညီမျှရေးဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများအနေဖြင့်ဗမာကိုချုပ်ကိုင်ထားလိုခြင်းသည်မိမိတို့၏အဓိကရည်မှန်း ချက်ဟုတ်မ ဟုတ်ဆိုသည်ကိုသတိပြုမိဖို့လိုသည်။ မိမိတို့၏အဓိကရည်မှန်းချက်သည်၊ ဗမာကိုချုပ်ကိုင်ဖို့လော ? မိမိပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သောတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၊တန်းတူညီမျှ ရေးရဖို့လော? စမ်းစစ်နိုင်ဖို့လိုသည်။ ထို့အတူတိုင်း(၇)တိုင်းကိုလည်းမျှတသောအရွယ်အစားနယ်မြေ၊လူဦးရေသတ်မှတ်မှုဖြင့်(၇) ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသောပြည်နယ်များအဖြစ်သတ်မှတ်၍ထိုပြည်နယ်များသည် ဗမာပြည်နယ်ဆိုသည့်အနေ မျိုးထက် ဗဟိုတိုက်ရိုက်ချုပ်ကိုင်မှုမှကင်းလွတ်သောတိုင်းရင်းသား ဒေသပြည်နယ်များကဲ့သို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရပြည် နယ်များအသွင်သို့ကူးပြောင်းရမည်၊ သို့မှသာ ပြည်နယ်အသီးသီးသည် တန်းတူညီမျှမိမိပြည်နယ်များ တိုးတက် ရေးကိုလုပ်ဆောင် ကြပြီးပြည် နယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ တိုင်းပြည်သည်လည်းတိုးတက် လာ မည် ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဖယ်ဒရယ်အစိုးရသည်တိုင်းပြည်၏ကာကွယ်ရေး၊နိုင်ငံခြားရေး၊စီးပွါးရေး၊တရားဥပဒေပြု ရေးတို့ကို တာဝန်ယူ၍ပြည်နယ်များသည်၊ မိမိပြည်နယ်၏စီးပွါးရေး၊မိမိပြည်နယ်နှင့်သက်ဆိုင် သောဥပဒေများကိုပြဌါန်းနိုင် ခွင့်ြ့ပီးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး(Governor) သည်ပြည်နယ်ရှိပြည် သူလူထုကြီးမှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်လိုက် သူဖြစ် ပြီးသူ့တွင်ပြည်နယ်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အုပ်ချုပ် ပိုင်ခွင့်အပြည့် အဝရှိပြီးဗဟိုတရားဥပဒေသည် အကျိုးအကြောင်း မညီညွတ်ဘဲပြည်နယ်အကျိုး ကိုထိခိုက်လျှင် ပြည်နယ်မှငြင်းပိုင်ခွင့်ရှိသဖြင့်ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာအလွန် အကြွံ သုံးစွဲမှုမဖြစ် ရန်ထိန်းချုပ်ပိုင် ခွင့်ရှိသည်။
သို့မှသာပြည်နယ်တိုင်းတွင်ရှိနေသောလူမျိုးရေးပြသနာကိုရှင်းနိုင်ပေလိမ့်မည်။ပထမဦးဆုံးပြောင်းရမည်မှာလူမျိုးစုအခြေခံသည့် ပြည်နယ်များနှင့် ပြည်မရှိတိုင်းများကို တပြေးတည်းညီပြည်နယ်များ ဟူ၍သတ်မှတ်ရန်၊ လူမျိုးစွဲအခြေပြု ပြည်နယ်မှနယ်မြေ အခြေပြုပြည်နယ် အဖြစ်ပြောင်းရန်တို့ သည်ပြည်တွင်းစစ်၊လူမျိုးရေးပဋ္ဋိပက္ခ တို့မှရှောင်ကွင်းနိုင်မည့်တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ရှမ်း (ကမ္ဘောဇ) ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်သူများ အားလုံးက မိမိယုံကြည် အားထားသူကို ခေါင်းဆောင်တင်၍ ပြည်နယ်အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ထိုအခါ ထိုပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများက ပအို့ဝ်လူမျိုးကိုကြိုက်လျှင် ထိုပအို့ဝ်လူမျိုးသည် ကမ္ဘောဇ ပြည်နယ်၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာပေမည်။ ထိုခေါင်းဆောင်သည် ထိုပြည်ရှိ ရှမ်းလူမျိုးတို့၏ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ လူမျိုးစု ပြည်နယ်များဖြစ်သော ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တို့ကို လည်း လူမျိုးစွဲ ပြည်နယ်များအဖြစ်မှ နယ်မြေကို အခြေပြုသည့် ပြည်နယ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲ ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ပြည်မရှိ တိုင်းရင်းသားကိုလည်း တိုင်းအဖြစ်မှ ပြည်နယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်ဟူ၍ ကွဲပြားမှု မဖြစ်တော့ဘဲ ပြည်နယ် (၁၄) ပြည်နယ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖြစ် အကောင်အထည် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ဖယ်ဒရယ်စံနစ်သည် လူမျိုးစုတို့ကို အခြေမခံဘဲ ပြည်နယ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် မည်သည့်လူမျိုးစု ပြဿနာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မကြုံတွေ့ရသော်လည်း လူဖြူလူမဲ ပြဿနာကတော့ အကျွင်းအကျန်အဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ လူဖြူလူများစုက အခွင့်အရေးပို၍ ရနေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုရနေခြင်းကို ထိန်းညှိုရန်အတွက် Minority Rights ကို ဥပဒေထဲတွင်လည်းကောင်း ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အတွက်လည်းကောင်း ထည့်ပေးထားခြင်းဖြင့် လူနည်းစုများ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေး သည်။ မည်သည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့ဖြင့် လူနည်းစု၊ လူမျိုးစုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးမည် ဆိုသည်ကို နောင်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ညီလာခံကြီးတွင် ဆွေးနွေး ညှိုနှိုင်းကြဘို့လိုသည်။ ခေတ်သစ် ပင်လုံစာချုပ်
(၄) ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်ရန်တို့ဖြစ်သည်။ မဲသရောထ ကြေငြာစာတမ်းပါ အချက် (၆) ချက်သည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်လိုသူများ မငြင်းပယ်နိုင်သည့် အချက်ကြီးဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ၎င်းအချက်များကို အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်တွင် ဖတ်ပြပြီး ထောက်ခံခဲ့သော ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ချစ်ခင်လေးစား ထောက်ခံကြသည်ဟု ဆိုလျှင် မမှားနိုင်ပါ။
န၀တ/ နအဖ လက်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ယနေ့ အခြေအနေသည် ပြိုကွဲ ပျက်စီးတော့မည့် အနေအထားသို့ ဆိုက်ရောက်လျက် ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နအဖနှင့် ရယူထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ယာယီ အပစ်အခတ် ရပ်ထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကာလတခုသာဖြစ်သည်။ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်ရန်မှာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌါန်းခွင့် ရရှိရေးနှင့် တန်းတူညီမျှရေးသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုအချက်တို့ကို စားပွဲဝိုင်းတွင် မဖြေရှင်းသရွေ ပြေလည်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဖယ်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်တိုင်း ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌါန်းခွင့်ရှိသည်။ ပြည်နယ် တခုချင်းစီ၏ အခြေခံဥပဒေသည်၊ ပြည်နယ် တခုနှင့်တခု ပြဋ္ဌါန်းသော ဥပဒေများ တူညီချင်မှ တူညီနိုင်သော်လည်း ဖယ်ဒရယ် အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်လျှင် ဖယ်ဒရယ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်သည်။ ဖယ်ဒရယ် အစိုးရသည် ဗဟိုအစိုးရ ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ် အစိုးရသည် ၎င်းပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူ များက ရွေးချယ် တင်မြောက်သည့်သူသည် Governor ဘုရင်ခံဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်တိုင်းတွင် အထက်လွှတ်တော်အမတ် နှစ်ဦးနှင့် လူဦးရေအလိုက် အောက်လွှတ်တော် အမတ်များကို ရွေးချယ်ပေးရသည်။ သမတကို ပြည်နယ်အားလုံးမှ ပြည်သူများက တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိသည်။ သမတသည် ပြည်နယ်အားလုံး၏ ရွေးချယ် တင်မြှောက်မှုကြောင့် ဖယ်ဒရယ် အစိုးရကို ဦးဆောင်သည်။
ယနေ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေသည် ပြည်တွင်းစစ်ဆီသို့ ဦးတည်နေသည်ဟု သုံးသပ်သည်။ ကချင်တပ်များ၊ ၀တပ်များ၊ ရှမ်းတပ်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားခြင်းမှ ပျက်ပျယ်နေပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည်လည်း ကြိုတင်မဲဆိုသည့် မဲလိမ်မဲခိုးမှုများဖြင့် သမိုင်းတွင်ရစ်မည့်လုပ်ရပ်ဖြင့် ပြီးစီးသွားခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် နအဖတို့ကြား နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် စစ်ခေါင်းဆောင်များ ဖက်မှ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှိသူ ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာဘို့ လိုအပ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်သမတဖြစ်လာပြီးနောက်မထင်မှတ်ဘဲပြုပြင် ပြောင်း လဲမှုများကိုလုပ်ပြလာခဲ့သည့်အပေါ်အမေရိကန်နှင့်အနောက်ဥရောကနိုင်ငံများကစီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုယုတ်သိမ်းလာခဲ့သည်။ မီဒီယာလွတ်လပ်မှုများသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးလက်ပန်းတန်းတောင်ဆန္ဒပြမှုကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့ခြင်းသည်အနှုတ်သဘောဆောင်ခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်သည်ပင်လုံကဲ့သို့ညီလာခံကြီးပြုလုပ်မည် ဟုပြောကြားခဲ့သည်ကိုတကယ်လုပ်မလုပ်စောင့်ကြည့်ရပေအုံးမည်။
ထို့အတူ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ထဲမှလည်း ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ပြည်နယ် အစွဲမှ ကင်းလွတ်ပြီး တနိုင်ငံလုံး လွတ်မြောက်မှ ငါတို့ လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ချီတဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲ ကြိုးစား ဘို့ လိုပါသည်။ မိမိပြည်နယ်တွင်းရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံ တိုးတက်ရေးထက် မိမိ လူမျိုး တမျိုးတည်း အတွက်သာ ဦးတည် လုပ်ဆောင်ပါက ဒေသတွင်းရှိ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခကို ဦးတည်စေပါသည်။ တချို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များတွင် မိမိခေါင်းဆောင်မှု ရရှိရေး အတွက် လူမျိုးရေး လှုံ့ဆော်မှုကို လုပ်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုရအောင် ယူတတ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လူမျိုးများ သည် တိုင်းပြည်အတွက်ရော ၎င်းကိုယ်စားပြုသည့် ပြည်နယ်အတွက်ရော အလွန်အန္တရာယ် ကြီးပါသည်။ ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ့်လူမျိုး သူ့လူမျိုး အမြင် ထက် တနိုင်ငံလုံးရှိသူ သူများသည် မိမိနိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည် ဆိုသည့် အမြင်ရှိဘို့ လိုပါ သည်။ ထိုအမြင် ထိုအတွေးရှိမှ တနိုင်ငံလုံး အရေးကို စေတနာထား၍ လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ရေရှည် အမြင်ရှိသူဖြစ်ခြင်း၊ သဘောထား ကြီးသူဖြစ်ခြင်း၊ မှန်ကန်သည်ဟု ယုံကြည်လျှင် ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ခြင်း၊ မှားမှန်း သိလျှင်လည်း ၀န်ခံ၍ ပြင်ဆင်ရန် ၀န်မလေးသူဖြစ်ခြင်း၊ အများကောင်းစားရေးကို ရှေးရှုသူဖြစ်ခြင်း၊ မိမိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထက် တိုင်းပြည်အရေးကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက် ကိုယ်ကျိုး စွန့်နိုင်သူဖြစ်ခြင်းဆိုသည့် အချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိမှသာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း မည်ပါသည်။
ဥပမာ။ ။ ချင်းတောင်တန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် အခြား ပြည်နယ်များထက် နိမ့်ကျနေ ပါက ဖယ်ဒရယ် ဗဟိုအစိုးရမှ ချင်းတောင်တန်းကို ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပိုမို ထောက်ပံ့ပေး ခြင်းဖြင့် ချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ အဓိက အရေးကြီးသော အချက်မှာ ဖယ်ဒရယ် နိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရန် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြသော အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိ လိုလားချက်များကို အသေဆုတ်ကိုင်ထားခြင်း မပြုဘဲ (Compromise) အလျော့အတင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် နေရာတွင် ပြုလုပ်နိုင်ဘို့ လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ အလျော့အတင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် စိတ်ဓါတ်ကို မွေးမြူမှသာ ဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မည့်သည့်အရာမျှ အလျော့မပေး ဆိုသည့် စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းသည် အောင်မြင်နိုင်သည့် နည်းလမ်း မဟုတ်သလို၊ ဆွေးနွေးပွဲ ဟူ၍လည်း မခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။ တောင်းဆိုပွဲသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစ မြန်မာပြည်တွင် ပြည်တွင်းစစ် တောက်လောင်စဉ်က ရည်မှန်း ချက်နှင့် ယနေ့ ရည်မှန်းချက်တို့သည် သိသိသာသာ ကွာခြားသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသည် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးမဟုတ်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ တပါတီ အာဏာရှင်စံနစ်ကို အလုပ်သမား လယ်သမား လူတန်းစား အခြေပြု၍ တည်ဆောက်ရန် လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကွန်ဂရက်မှ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစံနစ် ဖော်ဆောင်ရေး လမ်းစဉ်ကို ချခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့ ထိကမ္ဘာပေါ် ရှိ ကွန်မြူနစ်အစိုးရများသည်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစံနစ်ကိုခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးချေ။ ထို့အတူ ကရင်ပုန်ကန်မှုသည် ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့တို့၏ Divide and Rule Policy အရ ပြည်နယ်ပြည်မ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်သွားခြင်း၏ ရလာဒ်ဖြစ်သည်။ ရှမ်းစော်ဘွား များ၏ ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် တောင်းဆိုမှုကလည်း ပဒေသရာဇ် စံနစ်ကို ထူထောင်၍ မိမိပြည်နယ် မိမိအုပ်ချုပ်ြ့ပီး သားစဉ်မြေးဆက် အမွေ ဆက်ခံနိုင်ရေး ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးမဟုတ်။
နိဂုံး ။ ။ ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ နိုင်ငံအများက အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုကို အား ကျကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံလို ဖြစ်ချင်ကြသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဖယ်ဒရယ်စစ်စစ် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား စစ်စစ် များသည် Native American ဟု ခေါ်သော Red Indians များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အသားနီစပ်စပ်နှင့် ကုလားရုပ် ပေါ်နေ၍ လူဖြူများက Red Indians ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် ဌာနေ လူမျိုးစုတို့က Red Indians (ကုလားနီများ) အခေါ်အဝေါ်သည် ၎င်းတို့ကို နှိမ့်ချထားသည်ဟု ကန့်ကွက် ပြောဆိုလာသဖြင့် Native Americans ဟု အခေါ်ကို ပြောင်းလဲ သုံးစွဲလာကြသည်။ ၎င်း (Native) ဌာနေ လူမျိုးစုတို့က လူဖြူများ ၎င်းနိုင်ငံသို့ အခြေချ နေထိုင် လာသဖြင့် ၎င်းတို့မှာ လူနည်းစု ဖြစ်လာရသည်ကို ထောက်ပြ၍ ၎င်းတို့၏ လူနည်းစု အခွင့် အရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ထိမ်းသိမ်းရေးတို့ကို တောင်းဆို တင်ပြမှုအပေါ် အစိုးရက ၎င်းတို့အတွက် အထူး ရန်ပုံငွေများ၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စီးပွားရေး လုပ်ကွက်များကို ပေးခဲ့ရသည်။ ယ္ခုအခါ ၎င်းတို့ကိုယ်၌ ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်များအဖြစ် ခံယူနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်သည် ဆိုးဝါးသော ပြည်တွင်းစစ်ကိုလည်း တောင်မြောက်ကွဲပြီး ဖြတ် သန်းခဲ့ရသည်။ မြောက်ပိုင်းမှ ကျေးကျွန်စံနစ်ကို ဖျက်သိမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော စစ်ပွဲ တွင် ကျွန်စံနစ် ဖျက်သိမ်းလိုသည် မြောက်ပိုင်းမှ အနိုင်ရသွားခဲ့သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံသားများသည် မိမိတို့ မျိုးရိုးက ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ တိုင်းပြည် က ပထမဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဆိုသည်ကို ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစွာ ပြောနိုင်ကြသည်။ မြန်မာ ပြည်တွင် မိမိတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သည်ဟု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတို့က မပြောလိုကြ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည်ဟူသော ခံယူချက်ကို ထားနိုင်မှ စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစွဲများကို ဖြေဖျောက်နိုင်မှသာ ပြည် ထောင်စု နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။